Iiraan oo gantaallo ku duqeysan saldhigyada ciidamada Mareykanka – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Iiraan oo gantaallo ku duqeysan saldhigyada ciidamada Mareykanka
iran ayaa Gantaalo ku duqeysay saldhigyada mareykanka ee iraq iyada oo wareerartey labo saldhig oo Ciraaq ay ku la haayeen ciidamada Mareykanka xilli xiisado kacsan ay ka dambeeyeen dilkii Mareykanka ee Soleimani.
Iran ayaa ku duqeeysay gantaallo in kabadan laba saldhig militari oo ay Ciraaq ku lahayeen ciidamada Mareykanka, Pentagon-ka ayaa xaqiijiyay.
wasaarada gaashaan dhiga mareykanka ayaana xaqiijiyey in la wareerey saldhigyo ciidamo oo ay ku lahaayeen ciraaq
Gantaaladan ayaa lagu tuuray saldhiga Ain al-Asad ee gobolka Anbar iyo saldhig ku yaal magaalada Erbil horaantii Arbacadii ayaa yimid xilli ay sii kordhayaan xiisadaha u dhexeeya Tehran iyo Washington.
Weeraradan ayaa daba socda dilkii Mareykanku ku dilay taliyihii militariga Iran Qassem Soleimani isbuucii lasoo dhaafay. Iran waxay wacad ku martay iney usoo aar gudi doonto
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa sheegay in xaaladda ay wanaagsan tahay, saldhigyo Mareykanka uu leeyahayna lagu weeraray gudaha dalka Ciraaq, qiimeynna ay ku sameynayaan sida ay wax u dhaceen, dibna ay kasoo sheegi doonaan.
iran ayaa ku tilmaamantey saldhigyadan meelo laga soo wareerey muwaadiniinteeda waxaana laga yaaba iney yihin saldhigyadii laga soo warerey dilkii suleeman ee ay dileen ciidamada mareykanku
Iran waxay weerarkan qaaday iyadoo eegeysa axdi qarameedka 51, waxayna duqeysay saldhigyadii sida fuleynimada ahaa looga soo weerary muwaadiniinteena, mana raadineyno dagaal ee waxaan difaaceynaa nafsadeena”, ayuu kusoo qoray bartiisa Twitter-ka.
Iran ayaa u digtay wadamada xulafada la ah Mareykanka ee dalalkooda u oggolaaday in uu saldhigyo ku yeesho.
Madaxweeyne Donald Trump ayaa horay u sheegay in hadii ciidamada Mareykanka lasoo weeraro ay iyaguna weerari doonaan Iran, waxaase aan la ogeyn tallaabada xigta ee uu Mareykanka qaadi doona.
saamiga saliida kaydka ayaa hoos u dhacay ka dib weerarkii Iran
Qiimaha saliida ayaa kor u kacay ka dib weerarkii Iiraan ee lagu wareerey ciidamadii Mareykanka ee ku sugnaa Ciraaq, taasoo sare u qaadaysa rajada ah in gobolka la kala diro taasoo carqaladeynaysa sahayda saliida. Kaydka ayaa si aad ah hoos ugu dhacay.
Qarax Lala Eegtay Mas’uul Oo Ka Dhacay Duleedka Muqdisho